Taariikhda My Butros » Dating – Ma Waxaad shirqoolaan Naftaada?
Last updated: Jan. 21 2021 | 5 min akhri
"Waan necbahay shukaansi" waa a comment aan ka maqalno haweenka macaamiisha aan sidoo kale marar badan. Fikirka noocan ah negative dhinaca shukaansiga waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee in haweenka aan la qabin joogi kartaa 'dhagaan' iyo hal waayo, sidaas dheer. Inta badan haweenka ee aan soo gaarto in aan hab dhaqanka tababarka shukaansi la gabi ahaanba qaldan maanka ku set, taasoo la micno ah in sida ay u Dhawaanina dhab shukaansi sabotages fursada la kulanka lamaanahaaga noloshooda ay.
Oo weliba habdhaqanka tani waa si buuxda u fahmi karo. Waxaan wada marnay, '' Qasbo nafteena si aad u hesho ciyaarta, xidhmin goobaha shukaansiga online, trawling marayo fariimaha kuwaas oo mararka qaarkood sameeyaan gurguurto maqaarka, sidoo kale marar badan ka ragga is qaba iyo undesirables kale, iyo ugu danbeyn la siinayo qof fursad, sababtoo ah wuxuu u muuqataa fiican. Making xiriir, sheekaynta iyo gadaal, laga yaabee in xitaa laga bilaabo si ay u helaan flicker ah farax - uu u muuqataa fiican, uu arrin wanaagsan raadinaya in sawirada iyo waxa jira xidhiidh ka tirsa. Si aad u diyaarsato shir. Waxaad tahay dareemayaasha, waxaad bixisaan oo waqti badan iyo tamar taamaan, waxaad la Yaabteen haddii aad khalad samaynta, laakiin aad ku dadaali, jiidin, maradaadana, soo baxa qabow iyo u safraan meel kasta (marar badan dhowr saacadood oo xitaa) si ay ula kulmaan taariikhda. Waxaad dareemayso faraxsanahay hadda, ka dib dhan uu noqon karaa 'mid ka mid ah'.
Ka dibna waxaad ku arki! Your wadnaha lagu dhibciyo, waayo, wuxuu u egtahay wax la mid ah sawirada uu, dhab ahaantii uu ku badan yahay 'Shrek' badan 'Becks'. Waxa uu laba inches ka gaaban uu sheegay in uu ku, iyo sawirada dadka la iska cad qaaday dhowr sano ka hor idinkoo xukumaya miisaan dheeraad ah oo aan jirin oo kala ah dhogor! Si kastaba ha ahaatee aad kullanka si loo xaliyo si 'isku day' si ay isaga u siiyaan fursad, Waxaan ula jeedaa inaad yimid jidka oo dhan halkan! Waxaa jira oo ku saabsan magnetism badan sida in aad la kaabajka ah soggy dareento oo aad isla markiiba bilaabi lahayd qorshaynta fakashada. Laakiin aadan rabin in fiicnayn si aad u fadhiisan iyada oo saacad hareen wareega of sirgaxan, wada hadal akhlaaq leh oo ku saabsan wax badan, iyo waqtiga oo dhan aad kaliya cuncun inuu u cararo. Xiriir ah in uu jiray online waa meel lagu arkay iyo in aad si cad u yihiin labada dareen raaxo. Sida aad ka tagto in roob aad la yaabanahay sababta aad ku qaatay waqti ku, lacag iyo dadaal in ay yimaadaan taariikhda kale oo aad u madax dareen guriga ceeboobeen, oo xataa ka badan si adag oo tiirar adag la rumaysan yahay in ay jiraan kaliya ma jiraan rag hufan baxay waxaa aad u! Waxaa jirin haweenka yaab heli khaati.
Dating awooddo noqon niyad-jab iyo waa ay fududahay in aad hesho jabay. Waxay dareemi karaan dheecaan iyo xitaa niyad jab wadnaha si ay u tagaan on taxane ah oo taariikhaha leh dadka in aad dareento dhimbiil ma leh, , waxaana rajo shirka la Wadaage mar kale iyo mar tuuri aad. Waxaa jira halis ah gubanayo marka aad samayn badan oo shukaansi iyo haweenka qaarkood waxay noqon karaan kuwo gedaaman iyo xitaa jaded. Tani ma in uu kaa caawiyo in aad xaaladda at dhan, sababtoo ah marka ay jirto xaalad this, hal haween oo si fudud ayaa seegi kara iyada Mr Right wadajir markii uu ku dherersan u soo.
Ma ogtahay in haweenka badankoodu nin aan run ahaantii, malana in ay mar dambe tago, inay guursadaan marka ugu horeysa ee isaga ka hor tago samayn? Interesting! Daraasad dhawaan in News Daily ku qiyaasay ilaa 22% lamaanaha kulmaan shaqo. Tani waa shil no – waa sababta oo ah soo jiidashada la oggol yahay in la dhiso si dabiici ah, muddo ka dib. Oo isna wuxuu mararka inta badan waa qof in aad marnaba siin lahaa fursad ay ku haddii aad la kulmay online, wax ay ku haay maanka sida aad xaggaaga kulan aad.
Sidaas waxa si markaas samayn u beddesho dareen diidmo ah oo ku saabsan shukaansi?
Well ahaantii wareejin fudud in fikradda waa wax loo baahan yahay oo dhan inay u beddesho waayo-aragnimo oo dhan shukaansi naftaada si aad si dhab ah u bilaabi karto ku riyaaqayaa, iyo aad si dhakhso ah u wici kartaa in aad nin badan. Haddii haweenka bilaabi kartaa arkaysid shukaansi sida 'dhaqanka fun'Ay yeelan doonaan guulo badan oo dheeraad ah, iyo sidoo kale ay u badan oo dheeraad ah ku raaxaysan doonaa habka. Sidaas waxa dhabta 'dhaqanka fun'Macnaheedu?
Taladan TOP ayaa kuu sheegi doona sida loo isticmaalo ee 'madadaalo dhaqanka ' hab loogu talagalay guusha.
1. Rid ajendaha.
Ha u malaynina isaga sida lamaane nolosha ku iman kara, halkii noqon joogo in la joogo qofkan cusub oo noqon cajiib ah isaga ku saabsan. Waxa kaliya taariikhda a – waxaa waa yabooh aan lahayn of xiriir ama guur - waa kaliya kafeega ah, ama socod ama wax kasta oo aad isla sameyneysaan. Halkan faa'iidooyinka The laban yihiin, marka ugu horeysa ay ku qaadan doonto cadaadiska dhan off si labadaba aad ku nasan karaan, oo uu dareemi doonaa in. Dadka wanaagsan intooda badan waa nervous on taariikh koowaad hana isa soo taagaan ay u fiican, si kastaba ha ahaatee tani waxay kaa caawin doontaa in ku riday istareexsan. Marka labaad waxaad ka heli in ay ku dhaqmaan joogo ragga oo aad jeceshahay, taasoo la micno ah in aad isku kalsooni kor u kaco, iyo marka 'aad nin' ma muujiyaan ilaa aad diyaar u tahay isaga sababtoo ah waxaad noqon 'dabiiciga ah'.
2. Hayso taariikhaha bilowga ah mid aad u gaaban.
Ha aqbali taariikhaha casho ee taariikhaha ugu horeeya, sababtoo ah waxay aad u dheer in ay la qaataan qof aanad aqoonin aad tahay. Saacad mar kasta waa badan ku bixiyaan dhowr ugu horeysay ee kulan. Waa Short iyo impactful waxa aynu halkan. Tani waxay ku caawin karaan ka hortagi doontaa gubanayo inta aad shukaansi dhowr qof mar bilowga.
3. Ha online leh dadka ku nool aad u fogaan aad ka xiriiraan.
Tani badbaadiyay tamar badan iyo xunuun. Hoggaamiya ah in taariikhda dadka kaliya kuwa maxalliga ah si aad u (gudahood dushooda masaafada safarka saacad ee). Inta badan goobaha internetka ay leeyihiin calaamada lagu halka aad nadiifin kartaa natiijooyinka raadinta in ay kaliya ka mid ah dadka fogaansho mucayina. Zusuusta ma dhab taqaan qof aad ilaa aad ku kulmaan qof, sidaa darteed waxaa inta badan waa online xiriir in kaliya kuma jiro marka aad la kulanto fool ka fool ah. Waxaan sidoo kale doodo ninka safraya naagtii ku taariikhaha.
4. Is dejiya oo wuxuu ku raaxaysan taariikhda. Waqti Fiican!
Iska – taasi macnaheedu ma aha cabbi truckload ah ee khamriga! In kasta oo aan samayn fahmi karo sababta dadkan sida cabniin ah oo ku saabsan taariikh ugu horeysay waxaa wanaagsan in wadajir fogaadaan ama ku eekaan kaliya hal maalinta ugu horeysa ee si aad dhab ahaantii sii cad madax karo oo ay arki doonaan sida aad dareensan tahay taariikhdan, aan khamriga la siinayo wax towns ah oo subag. Halkii loo arko haddii aad ka heli kartaa wax u xiiso badan isaga ku saabsan, qof kasta uu leeyahay wax!
5. Sii fursad.
Taas macnaheedu waa in uu taariikhda labaad haddii uu codsado hal, waase in aad dareento ammaan isaga la. Waxaad isaga u siiyaan fursad this xataa haddii aadan u malayn jiidatay isaga si. Haa HORTA! Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah geeddi-socodka, gaar ahaan dumarka ay ku isdaba joogga ah ee xidhiidhada xun iyo ragga soo gaaray kuwaas oo aan iyaga aawadood wanaag.
6. Ha ku keeni
Tani waa qayb ka mid dhan oo aan hab guud ee dumarka raadsanaya xiriir faraxsan. Sidaas darteed uu mid ka mid ah si aad u codsato taariikhda labaad uu noqon doonaa, haddii ay jirto inay ka mid. Waxaan sidoo kale ku doodaya in uu bixisaa, waayo taasi waxay ka taagay xiriirka firfircoon si sax ah, inkastoo aan wax ogayn waa lagu muransan yahay in ay dadka qaar. Mudanayaal aad rabto in aad la romanticized xaq u?
7. Layliska dhamaystiran daacadnimo ku saabsan sida aad dareensan tahay.
Marka aad ku jirtid taariikhaha la nimankaas inaad run tahay oo aad tidhaahdaan sida aad u dareento, xataa haddii ay taasi yahay wax laga xishoodo in sidaas la sameeyo marka hore. Sidaas darteed haddii aad dareento daal dareemayn / dareemayaasha / dansan / xiiseyneyso / faraxsanahay aad u sheegan kartid in. Ma aha in hab bitchy, in si furan oo daacad ah. Tani terrifies dumarka qaarkood, oo waxaad la yaabi doonaan sida dadka badankiisu waxay qaadan doontaa in ay boosaskooda iyo mahad daacadnimo ah. Plus waxaa furmaya hab for real, isgaarsiinta daacad ah, oo isaga ku siinayaa jawaab-celinta taas oo ah fursad dahabi ah oo isaga wax la qabsato oo talaabo u jira kulankiisii ​​aad u (haddii uu u arko in u qalantaa – taas oo aad tahay).
8. Si edeb, xiiso leh oo si edeb.
Waxaad u malayn maayo yaabaa in uu yahay nin aad u fiican laakiin waxa uu tusay kuu ah iyo waxa aad loola dhaqmo si taariikh, iyo in uu u qalmo mahadnaq.
Dating sidaas laguma caawin doonaa oo kaliya in aad ku raaxaysan more, laakiin waxa ay sidoo kale ku caawin doontaa in ay dhisto 'muruqa xiriirka' sababtoo ah waxaad ka heli doontaa in ay ku dhaqmaan isagoo naftaada (xoog ah, Haweeney dhedig) agagaarka ragga dhabta ah. Oo intii aad this aad nin dhan qabanayaan ilaa tusi doono markii aad ugu yaraan u fili!
Raac tilmaamahan sare u shukaansi iyo la arko sida aad waayo-aragnimo shukaansi gebi badalaa.
Dating Talooyin Wixii xishood ayaa, Qofka ugu qajilida